Warar - Basal dalag xilliyeed soo baxaya!
Mid ka mid ah qaybaha abaalmarinta badan ee shaqadayda dhageyste ahaan wanaagsan waa waxyaabaha yaryar ee aad dhammaantiin ila wadaageysaan, ha ahaato suxuunta guriga lagu sameeyo, warka ku saabsan waddammadaada, sawirka wax soo saarka beeraha ee aad ku beertid dalal, ama kuwa ugu fiican dhammaantood, markay arkeen dalagyadii aan soo goynay sannado badan ayaa si lama filaan ah uga soo dhex abuurmay iniinyaha ku dhex jira carrada si ay u gaaraan gaashaammadooda. [kudar dalag dalag halkan inta udhaxeysa] Naf yaab leh ayaa ila wadaagtay sawirka kor ku xusan usbuucii hore. Waxay soo koobeysaa wax walba oo aan isku dayey inaan halkan ka sheego tobankii sano ee la soo dhaafay. Waxaan ku heli karaa waqti dheer hawo gaaban waqtigan. Gabi ahaanba ma haysto wax aan ku daro qoraalkaas quruxda badan.
Basashayadu waxaa la beeraa xilliga dayrta sannad kasta, marka laga reebo basasha yaryar ee xididdada leh oo keliya ku koraan qaybta ugu qabow waqooyiga. Sidaan wada ognahay, xilliga basasha marwalba waxay umuuqataa mid aad uyar. Xaqiiqdu waxay tahay inaan ku nool nahay jawi kulul, qoyan, qoyan. Kuleyl, qoyan, iyo qoyan ayaa ah xaaladaha ugu fiican ee kudka dhirta dhirta inay soo baxaan. Waxaan ku dadaalaynaa inaan hubinno inaan ka bilowno dhirta ugu caafimaad badan ee suurtagalka ah, isla markaana aan siino carrada wax kasta oo ay suuragal tahay in uu geed doonayo. Gaaban u guurista cimilo qalalan, ama adeegsiga sunta sunta ah ee xun, waxaan badiyaa helnaa dhowr toddobaad oo goosashada ah. Waxaan helnay dhowr toddobaad oo basal ah sannadkan; sax celcelis ahaan, waxaanan u malaynayaa inay ahayd soo-jiidasho wanaagsan oo loogu talagalay wixii xilliga dayrta ee sida cajiibka ah ugu habboon.
Bixinta Noofambar waxay heli kartaa iftiin yar maaddaama inta badan dareenkeennu u weecanayo helitaanka dayrta iyo dalagyada jiilaalka oo la aasaaso, sidaa darteed dhammaantayo waxaan haysannaa waxyaabo wanaagsan oo aan ku cuni karno qeybta dambe ee sanadka beeraha.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, ma jeclaan laheyd inaad fiiriso degelkeena cusub ee la aasaasay? Beerta AGR Basasha runti waxay rabtaa inay kaa maqasho adiga! Dhagsii xiriiriyahan www.primeagr.com oo muuji codkaaga! Waad ku mahadsan tahay had iyo jeer ganacsigaaga, oo waxaad leedahay toddobaad wanaagsan!